Abidia mpizahatany (II) | Vaovao momba ny dia
Carmen Guillen | | tanàna, General
Raha nahita herinandro vitsivitsy lasa izay izahay dia nanomboka ity abidia mandeha manokana ity. Raha tsy nahatratra ny fizarana voalohany ianao dia aza misalasala mitsidika ilay rohy eto. Manohy amin'ny bingo izahay ary anio dia manolotra ny fizarana faharoa amin'ity lahatsoratra manokana ity, indrindra ny abidia mpandeha (II).
Raha vonona hahita toerana tsy fantatrao akory ianao na mahatadidy ireo hafa efa notsidihinao nefa tsy tafiditra ao aminy dia tohizo hatrany ny famakiana ity lahatsoratra ity. Hanaiky ahy amin'ny fifidianana ve ianao? Hitantsika izao!
1 -OR- Oslo (Norvezy)
3 -Q- Quito (Ekoatera)
4 -R- Roma (Italia)
5 -S- Seville (Andalusia, Espana)
6 -T- Trinidad sy Tobago
8 -V- Warsaw (Polonina)
9 -Y- Yokohama (Japon)
-OR- Oslo (Norvezy)
Miaraka amin'ny litera "O" dia misafidy an'i Oslo aho amin'ny maha-tanàna be mpiorina azy nefa tsy manana mponina an-tapitrisany. Ny zavatra miantso ahy kely indrindra momba ity tanàna ity dia ny maripana antonony isam-bolana anao. Mangatsiaka fotsiny ny fahalalana azy!
Janoary: - 5 ºC
Febroary: - 4 ºC
Martsa: - 1 ºC
Aprily: 4 ºC
Mey: 10 ºC
Jona: 14 ºC
Jolay: 15 ºC
Aogositra: 14 ºC
Septambra: 10 ºC
Oktobra: 6 ºC
Novambra: 0 ºC
Desambra: -3 ºC
Ny zava-misy iray hafa izay tiako be indrindra rehefa mitsidika tanàna iray dia ny hoe misy toerana ho an'ny karazam-pinoana sy finoana rehetra: bodista, silamo, kristiana, humanista sns. Ity data ity dia milaza betsaka momba ny tanàna iray.
Miala tsiny amin'ny fidirana amin'ny fivoriambe sy tanàna mahazatra hitsidihana, fa ny tantaram-pitiavana toa ahy dia tsy afaka tsy hijery ny tanàna iray "voatokana" ho an'ny fitiavana toa an'i Paris.
Tsidiho ny Katedraly Notre Dame, la Eiffel Tower, ny Museum an'i Louvre miaraka amin'ny endriny piramida mampiavaka azy, ny Museum Orsai, sns ...
Ary tsy haiko ny mieritreritra ny tenako miaraka amin'ny tanako mpiara-miasa amiko, mandehandeha mamaky ilay zaridaina lava izay tonga eo am-poton'ny tilikambo lehibe… Tiako izany!
-Q- Quito (Ekoatera)
Quito, na San Francisco de Quito ho marimarina kokoa, no renivohitr'i Ekoatera, araka ny efa fantatrao. Fa maninona no mifidy ity tanàna ity aho?
Ho an'ny ny renivohitra tranainy indrindra any Amerika atsimo.
ny tsara ny toetrandro.
ny ny maha-akaiky sy tsara fanahy ny olony.
Ho an'ny maro an'isa faritra mitsidika: La Moya miorina ao amin'ny Lohasahan'ny Chillos, La Capilla del Hombre, ny volkano Pichincha, ireo fiangonana sy basilicas maro azy, ny Katedraly Metropolitan, sns.
-R- Roma (Italia)
Eny, ity no ho lahatsoratra an-tanàna mahazatra (heveriko). Fony mbola zazakely aho dia nilalao ilay lalao mahazatra niaraka tamin'ny namako mba hanontany tena hoe "iza no hanambadiantsika", "firy ny zaza hananantsika" ary "aiza no handehanantsika mitsangatsangana tantely" (heveriko fa ny vehivavy ihany no hahatakatra an'io), Mamaly amin'ny fotoana iray foana ny Roma .. fanontaniana farany. Ary tsy fantatro izy!
Fa tsy haiko, i Roma miaraka amin'i Paris dia ireo tanàna roa tantely tantely ireo. Ary na dia tsy hifidy azy hanao asa toy izany aza izy izao, dia tsy nisalasala nitsidika azy.
Any Roma dia tsy hanana andro hahitanao azy feno araka ny tokony ho izy:
Tsidiho ny tsara sy malaza Coliseum.
Su Forum Romanina.
Su Pantheon an'i Agrippa.
La Masindahy Masindahy Peter.
Atsipazo vola ao aminao Trevi Fountain ary manaova faniriana, nofinofy ho tanteraka (mety hitsangatsangana hafa ve?).
Ary i Roma dia tsy nisafidy izany hitsidihana fotsiny, fa ny hahafaly ahy hipetraka mandritra ny fotoana kelikely ... Satria ny lalana rehetra mankany Roma?
-S- Seville (Andalusia, Espana)
Soa ihany aho fa teraka tany atsimon'i Espana, ao amin'ny masoandro sy sariaka Andalusia. Ary na dia avy any Huelva aza aho ary tiako ny tanànako mihoatra ny zava-drehetra (izany no fahamarinana), ny tanàna rahavavinay, Seville, dia tsy maintsy jerena, eny na eny. Indrindra ho an'ireo olona mbola tsy namangy an'io. Mazava ho azy, mitandrema amin'ny fahavaratra! Azoko atao ny manoro ny volana lohataona hitsidika azy io, satria amin'ny fahavaratra dia tsy zaka ny hafanana eto an-drenivohitra Andalosiana.
Inona no azonao tsidihana any Seville?
Mahagaga Plaza de España.
El Real Alcazar.
Ny tilikambo volamena.
El Reniranon'i Guardalquivir avy amin'ny manodidina azy ao Triana.
El Monasiteran'ny Cartuja.
La Glorieta de Bécquer, namboarin'ilay poeta sy mpanao sary sokitra iray ihany, teraka tao Seville ihany.
Ary raha tsy miraharaha ahy ianao ary mitsidika azy eo antenatenan'ny fahavaratra dia afaka mitsidika foana ianao Huelva, izay manodidina ny 90 kilometatra miala sy mandro ny morontsiraka mahafinaritra. Ary koa ny fitsidihana azy izay samy ao ny morony toy ny ny tsofa afaka mahita hatsarana tsy tambo isaina ianao.
-T- Trinidad sy Tobago
Raha te-hitsidika tranokala ianao amin'ny ny toetrany kanto sy ny morontsiraka kristaly, Trinidad sy Tobago dia safidy tena tsara hodinihina. Eto izahay mamela anao sary tsy misy afa-tsy izay mety ho hitanao any fa raha mitady bebe kokoa ianao dia ho raiki-pitia amin'ity toerana ity.
Tanàna sy munisipan'ny faritanin'i Jaén any Andalusia. Úbeda, miaraka amin'i Baeza, dia nambara Lova ara-kolontsaina mahaolona an'ny Unesco tamin'ny 2003, ho an'ny kalitao sy fitehirizana tsara ireo tranoben'i Renaissance sy ny tontolo manodidina azy. Ity data ity dia efa afaka milaza amintsika izay omen'ity tanàna mahafinaritra antsika ity.
-V- Warsaw (Polonina)
Io no renivohitr'i Polonina ary ankehitriny ny tanàna eropeana fahasivy be mponina indrindra, misy mponina mihoatra ny 1,726,581. Inona no azonao tsidihina eto?
Tranombakoky ny fikomiana any Warsaw.
Ivotoerana siantifika Copernicus.
Faritra manodidina an'i Prague.
Lapan'ny kolotsaina sy ny siansa.
Ilay tanàna taloha sy ilay tanàna vaovao.
Tanàna manana tantara mahafinaritra!
-Y- Yokohama (Japon)
Tsy mbola nandeha aho fa te-hitsidika ity tanàna ity indray andro any. Satria? Noho ireo antony rehetra ireo:
Miakatra amin'ny mpandinika ny 'Landmark Tower'.
Mandehana any amin'ny voly fialamboly Tontolon'ny Cosmo.
Tsidiho ny sambo taloha Nippon Maru.
Tsidiho ireo zaridaina Japoney Sankeien.
Tanàna kely fantatra nefa feno tanteraka hitsidika azy.
Raha te-hitety fiangonana ianao handinika ny fananganana azy sy ny maritrano, raha tianao ny trano mimanda sy ny tantara manodidina azy tsirairay, angamba tokony hitsidika an'i Zamora ianao.
Io no tranonkala mahazatra hitsidika ny tetezana na faran'ny herinandro, izay mandehandeha mamakivaky ny ariny mideza sy vato fotsiny ianao dia mahatsapa ho tsara. Toerana misy tantara maro miaraka hatsaran-tarehy ambanivohitra mendrika jerena.
Ary hatreto ny abidia mandeha manokana ataonay. Manantena izahay fa nahafinaritra anao ny namaky anay toy ny nanoratako azy. Izao ihany no ilaintsika: mitsangatsangana amin'ireo toerana ireo! Faran'ny herinandro mahafinaritra!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Abidia mpizahatany (II)